Ajụjụ CBD - Gbalịa Deda Obi CBD
Jụọ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ azaghị azịza ebe a, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị
na 256-302-9824 ma ọ bụ zitere anyị email na service@trytranquil.net.
CBD bụ ihe na-emekarị nke ihe ọkụkụ nke ahịhịa hemp. Ọ bụ phytocannabinoid na-adịghị egbu egbu na-enye ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ. CBD bụ otu n'ime ọtụtụ phytocannabinoids na ọgwụ ndị ọzọ dị na hemp.
Gịnị bụ mmanụ CBD?
A na - enweta mmanụ CBD site na osisi hemp nwere nnukwu cannabidiol (CBD) na obere THC. Tranquil CBD na-ewepụta mmanụ kacha mma nke CBD, nke ewepụtara site na ahụike, osisi jupụtara na hemp toro eto ebe a na USA.
Kedu ka esi arụpụta mmanụ CBD anyị?
Anyị hemp bụ Food Alliance gbaara, toro ma na-egbute na anyị onwe anyị ala na Alabama & Kentucky. Na Tranquil Farms, anyị na-eji cryo ethanol extraction mepụta oke oyi decarboxylated, nke a na-eme ka ọ bụrụ nke distillate zuru oke site na ụzọ ndọtị (ntụgharị spd & wfd).
Kedu ihe dị iche na hemp na wii wii?
Sayensị, hemp na-arụ ọrụ na wii wii bụ otu osisi ahụ, nwere ụdị na ụdị aha Cannabis sativa. Ha nwere profaịlụ nke ihe omuma di iche. Otutu, hemp ulo oru bụ ezigbo fibrous na ogologo ike stalks na ole na ole okooko buds. Osisi wii wii na-akari obere, obere osisi, ma juputa na nkpuru ahihia. Agbanyeghị, a na-azụ ụdị hemp ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụụ na USA ka ha nwekwuo okooko osisi na mkpụrụ dị elu nke cannabinoids na terpenes, dị ka Kentucky hemp anyị na-eji ugbu a. Imirikiti oge, wii wii nwere THC dị elu na oke CBD. Hemp, n'aka nke ọzọ, nwere ihe dị elu nke CBD (n'ọtụtụ oge) ma na-achọpụta THC. N'ụzọ dị mma, profaịlụ cannabinoid nke hemp dị mma maka ndị na-achọ uru site na mmanya na-enweghị 'elu.' Kemgbe ụwa, a na-eji hemp emepụta ngwaahịa nri, eriri, eriri, akwụkwọ, brik, mmanụ, plastik nkịtị, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Na United States, a na-ejikarị wii wii eme ihe ntụrụndụ na ọgwụ. Okwu ahụ bụ "mmanụ cannabis" nwere ike ịpụta ma ọ bụ wii wii ma ọ bụ mmanụ sitere na hemp, ebe ọ bụ na wii wii na hemp bụ ụdị abụọ nke cannabis. A na-enweta mmanụ mmanụ niile dị jụụ na hemp.
Ndi CBD kwadoro iwu?
A na-enweta CBD site na hemp n'ofe USA. Na 2018, mmelite nke US Farm Bill nyere iwu ka ịzụlite hemp azụmaahịa n'okpuru iwu ụfọdụ. A na-enweta ngwaahịa CBD dị jụụ site na ndị America toro eto, nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na CBD zuru oke. Anyị ji nganga na-enye mbupu n'efu, ego ndị agha lagoro, na nnukwu nhọrọ ịzụrụ ihe na ngwaahịa anyị niile.
Kedu ka m ga-esi chekwaa CBD m? Gịnị bụ adị ndụ?
ma ọ bụ ndụ kachasị mma, ngwaahịa Tranquil gị kwesịrị ịchekwa na iru mmiri dị jụụ, jụụ, ọchịchịrị site na ìhè anyanwụ. Nke a ga - enyere aka ịchekwa ihe ejiri mepụta hemp. Ọ bụrụ na echekwara ya nke ọma CBD nwere ike ịbụ afọ ndụ 1.
M ga-ada ule ọgwụ ma ọ bụrụ na ewere ọgwụ CBD?
A na-enweta mmanụ CBD dị jụụ site na hemp na-arụ ọrụ na USA, ma nwee ike ịnwe akara THC dị n'okpuru 0.3%. Tranquil CBD anaghị ekwe gị nkwa na ị ga-agafe ma ọ bụ na ị gaghị agafe ihuenyo ọgwụ mgbe ị gachara ngwaahịa anyị. Ọ bụ omume na trace THC ọdịnaya nwere ike na-egosi na dị iche iche ọgwụ screenings.
Kedu usoro kachasị mma nke ojiji?
Ngwaahịa dị jụụ CBD dị n'ụdị dị iche iche. Anyị na-enye mmanụ CBD nke dị mfe, dị ọcha, ma dị irè, ma na-eri ya site na ịtụkwasị ụmụ irighiri mmiri n'okpuru ire. Anyị na-enye ngwaahịa mpịakọta, nke na-enye anaghị akwụ ụgwọ, ngwa ga-adaba adaba nke na-arụ ọrụ dị ukwuu na ịga ma na-enye gị ohere ịkọwa kpọmkwem ebe ịchọrọ ịche uru na-adịte aka. Anyị na-enyekwa ude mmiri, nke a na-agbanye mmanụ, nke dabara adaba, ma na-adịte aka, ma na-enye ọtụtụ uru ahụike. Biko lelee anya na blọọgụ anyị na ibe ngwaahịa dị iche iche iji chọpụta ngwaahịa nke kacha adabara gị na mkpa gị.
Aga m ebuli elu?
Mba anyị niile hemp wepụ ngwaahịa na-mere si ulo oru hemp na THC etoju n'okpuru 0.3%. Enweghị mmetọ na-egbu egbu site n'ị takingụ ngwaahịa anyị.
Gịnị bụ Tranquil CBD's mbupu amụma?
Mbupu United States nke United States bụ $ 7.99 kwa usoro a ga-ebufe ya site na FedEx iji mbufe elekere 48. Oge njikwa anyị bụ ụbọchị azụmahịa 2. Biko, kwe ka ụbọchị azụmahịa 4 nata usoro gị. Anyị anaghị ebute ụgbọ mmiri gaa Idaho, Montana ma ọ bụ South Dakota.
Mbupu International bụ $ 25.00 kwa usoro. Anaputara n’izugbe n ’abali iri asaa na asaa rue iri abuo iji bia. Oge ma ọ bụ oge nnyefe e kwere nkwa dị maka Mbupu Mba.
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji nweta ngwaahịa m?
Ga enweta ngwaahịa gị n’ime ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ rụọ ọrụ maka iwu nke Domestic United States. Iwu mba ụwa na-ewere ụbọchị 3-4 mana enweghị ike ịkwụ ụgwọ.
Ahịa niile a zụtara na saịtị a bụ FINAL. Alaghachi, ma ọ bụ nkwụghachi arịrịọ ga-agọ.
Steeti anyị anaghị ebuga na United States
N'ihi iwu gọọmentị etiti United States, anyị na-ebupụ ngwaahịa CBD na steeti US niile belụsọ Idaho, Wyoming na South Dakota. Anyị anaghị ebute ụgbọ mmiri na steeti ndị a.